Ahoana ny fampiasana tsara ny fitantarana an-tsary ny marikao amin'ny 2015 | Martech Zone
Mandritra ny buzzword tantara an-tsary mety ho vaovao, ny hevitra momba ny marketing amin'ny maso dia tsy. 65% amin'ny ankamaroan'ny mponina dia mianatra amin'ny fahitana, ary tsy takona afenina fa ny sary, sary ary sary no isan'ny atiny ankafizinao indrindra amin'ny tambajotra sosialy.
Ireo mpivarotra dia raisina an-tanana lavitra ny marketing amin'ny alàlan'ny famolavolana sy fanajana ny fotokevitra tantara an-tsary izay ampiasainay sary hilazana tantara iray.
Fa maninona no mandeha ny fanaovana tantara an-tsary?
Ny siansa dia milaza amintsika fa ny sary nojika dia te ho tia sary. Saika ny antsasaky ny atidohantsika no tafiditra amin'ny fikirakirana sary, ny fandikana ny sary tsy latsaky ny 1/10 segondra.
Fantatrao ve fa inona koa no itiavan'ny ati-dohanay? Tantara. Tsy afaka manampy azy isika. Voatery izahay handamina ny vaovao ho fitantarana.
Ity infographic, novokarin'i fitantanana fananana nomerika orinasa Widen, manome antontan'isa sy torohevitra tsara manodidina ny fitantarana an-tsary sy ny fomba fampiasanao azy amin'ny orinasanao.
Ireto misy fanasongadinana avy amin'ny sary
Ireo lahatsoratra misy sary dia mahazo fomba fijery 44% bebe kokoa noho ireo lahatsoratra tsy misy.
Ireo mpampiasa manindry ny sarin'ny olona tena izy dia 200% izay mety hiova ho amidy.
Ny sary dia mandrafitra ny 93% amin'ireo lahatsoratra mahasarika indrindra amin'ny Facebook (hatramin'ny 83% tamin'ny 2012).
Ny sioka misy sary dia mahazo retweet 150% bebe kokoa.
Tsy ny singa hita maso ihany no mitarika fifamofoana bebe kokoa, fa izy ireo koa dia manampy ny mpihaino anao hahatadidy ny atiny lava.
Mikorisa mamaky mba hamaky toro-hevitra azo ampiharina 14 amin'ny fanaovana tantara an-tsary ary zarao ny sasany amin'ireo tantaram-pahombiazanao fitantarana an-tsary ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany.
Tags: tohodranon'ifitantanana fananana nomerikafitantaranatantara an-tsaryhihamalalaka
Jul 15, 2015 amin'ny 9: 20 AM
Hevitra tsara eto! Ny infografika dia mety ho be fampahalalana sy mahaliana hovakiana - fa raha tsy ampiasaina amin'ny fomba mahomby sy noforonina tsara. Heveriko fa ohatra tsara ity iray ity! Misaotra ny fizarana.